Laba kamid ah musharaxiinta Soomaaliya oo Turkiga ‘uu xiriir dhow la leeeyahay’ - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Laba kamid ah musharaxiinta Soomaaliya oo Turkiga ‘uu xiriir dhow la leeeyahay’
Laba kamid ah musharaxiinta Soomaaliya oo Turkiga ‘uu xiriir dhow la leeeyahay’
Istanbul (Allbanaadir Media) – Sarkaal sare oo Turkish ah Serhat Orakci ayaa sheegay in Turkey ay la macaamili karto musharax kasta oo noqda madaxweynaha xiga ee Soomaaliya marka uu dhammaado muranka ka taagan doorashada Soomaaliya, wuxuuna si gaar ah u magacaabay laba ka mid ah..
Hadalka Serhat Orakci, oo ah cilmi-baare ka tirsan xarunta daraasaadka bulshada INSAMER ee magaalada Istanbul, ayaa yimid ayada oo maalmihii dhowaa la tuhmayey in Turkish-ka ay si hoose ula shaqeynayaan madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ciidamada Turkiga uu tababaray ee Gorgor iyo Haramcad u adeegsaday in lagu caburiyo mucaaradka.
Hase yeeshee Orakci ayaa muujiyey in Turkay ay sidoo kale xiriir dhow la leedahay musharaxiinta kale qaarkood.
“Qaar ka mid ah musharaxiinta waxay xiriir dhow oo taariikhi ah la leeyihiin Turkey, tusaale, madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo labaduba la shaqeeyey Turkey,” ayuu yiri Serhat Orakci.
“Waxaan u maleynayaa in Turkey ay awood u leedahay inay la shaqeyso musharax kasta oo noqon doona madaxweynaha xiga ee dalka marka murabnka doorashada uu dhammaado,” ayuu yiri.
Si kastaba, Serhat Orakci ayaa sheegay in siyaasadda Turkey ay ku wajahan Soomaaliya ay tahay mid diiradda lagu saaro horumarka dalka ee aanay quseyn shakhsiyaad gaar ah.
Turkey ayaa bishii tegtay walaac ka muujisay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka doorashada Soomaaliya, waxaana wasaaradda arrimaha dibedda dalkaas ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada Soomaalida inay ka fogaadaan tallaabooyinka horseedi kara rabshado.
Serhat Orakci ayaa sheegay in saraakiisha Turkey ay hadda si dhow isha ugu hayaan waxa ka socda Soomaaliya.